कला-मनोरञन Archives » Page3of 12 » Farakkon
ताली र प्रशंसाले कलाकारको पेट भरिन्न – हास्य कलाकार शंकर आचार्य
शनिबार, मंसिर ७, २०७६ २०:२३
पुर्ण केसी, दाङ, मंसिर ७ । चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखाले आज तुलसीपुरमा बरिस्ठ हास्य कलाकार एवम् फिल्म मेकर र अहिलेको चर्चित हास्य टेलिशृयल सक्किगोनीका मुख्य पात्र बरिसठे शंकर आचार्य संग साक्षात्कार गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका आचार्यले दाङमा…
दाङ फिल्म नगरी बन्न सक्छ ः अध्यक्ष उदय
बिहीबार, मंसिर ५, २०७६ १३:२३
शिव पुन, दाङ, मङ्सिर ५। चलचित्र संघका अध्यक्ष तथा सफल फिल्म निर्माता प्रदीप कुमार उदयले दाङ जिल्लालाई फिल्म नगरीको रुपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । दाङमा फिल्म छायांकनका लागी थुप्रै पर्यटकीय, धार्मिक,साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ठाउँहरु भएकोले जिल्लालाई सबै मिलेर…
‘चपली हाइट ३’को शुभमुहुर्त
मंगलवार, मंसिर ३, २०७६ १३:४८
मंसिर ३ । नेपाली चलचित्र ‘चपली हाइट ३’को शुभसाइत गरिएको छ । मंसिर ५ गतेबाट छायांकनमा जान लागेको चलचित्र कार्यविनायक मन्दिरमा पूजा गर्दै चलचित्रको शुभसाइत गरिएको हो । अर्जुन कुमारको निर्माणमा बन्न लागेको यो चलचित्रलाई निकेश खड्काले निर्देशन गर्दैछन् ।…
कुमारी हल बन्द
सोमबार, कार्तिक १८, २०७६ १७:२१
कार्तिक १८। काठमाडौँस्थित कमलपोखरीमा संचालन भैरहेको ‘कुमारी हल’ बन्द भएको छ । यो चलचित्र हल करिब एक महिनाका लागि बन्द हुने भएको हो । हललाई बन्द गरेरै केहि समय मर्मत गर्नुपरेको कुमारी हलले जनाएको छ । हलभित्र रहेका ट्वाइटेल र…
सनी बने पहिलो ‘आईएमई लोकस्टार’, नगद ५० लाख जिते
शनिबार, कार्तिक ९, २०७६ ०९:१२
दाङ,कात्तिक ९ । रोल्पाका १७ बर्षीय युवा सनी विश्वकर्माले ‘आईएमई लोकस्टार’को उपाधि जितेका छन्। पहिलो संस्करणको उपाधि जिते संगै सनीको चर्चा चुलिएको छ । उपाधिसँगै सनीले नगद ५० लाख रूपैंया नगद र २५ लाख बराबरको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवनबिमा प्राप्त…
मिडिया हब र ‘सक्किगोनि’बिचको विवाद टुंगियो
शुक्रबार, कार्तिक ८, २०७६ ११:३४
काठमाडौं, कार्तिक ८ । मिडिया हब प्रा.लि. र हास्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनि’समूहबिचको विवाद टुंगिएको छ। ‘सक्किगोनी’का पात्रहरु आफूले निर्माण गरेको दाबीसहित मिडिया हबले प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। यस विषयमा छलफल गर्न प्रहरीले शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। तर, उनीहरुले प्रहरीमा नगई…
बिहीबार, कार्तिक ७, २०७६ १२:१४
नेपाली र्‍यापर तथा गायक समिर घिसिङ ‘भिटेन’ पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले उनलाई जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो। समाजमा अपाच्य अश्लिल गीतहरू गाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ । रौतहटमा जन्मिएका भिटेन ‘चुरोट’ नामको गीतबाट चर्चामा आएको…
दुर्गेश थापाको गीतमा प्रतिवन्ध लगाउन सरकारको निर्देशन
मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६ २०:५७
काठमान्डौं, कात्तिक ५ । सरकारले दुर्गेश थापाको ‘ह्याप्पी तिहार’ बोलको गीतमा तत्काल प्रतिवन्ध लगाउने भएको छ । खानपानलाई अतिरञ्जित गर्दै नेपालीको संस्कृतिलाई नै विकृत बनाउने गरी शब्दहरू प्रयोग गरिएकाले प्रतिबन्ध लगाई प्रसारण तत्काल बन्द गर्न सरकारले मंगलवार निर्देशन दिएको छ।…
संगीत गायन तारा कार्यक्रम गरिने
सोमबार, कार्तिक ४, २०७६ २०:१२
यमकला भुसाल, तुलसीपुर, कार्तिक ४ । दाङमा ओम संगीत गायन तारा २०७६ सञ्चालन गरिने भएको छ । ओम सगिंत कला केन्द्र दाङको आयोजनामा मंसिर महिनाको पहिलो सातादेखि कार्यक्रम हुने जानकारी दिइएको छ । रिपोटर्स क्लव दाङ तुलसीपुरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन…
प्राइभेट जहाज चढ्ने बलिउडका ६ अभिनेत्री को को हुन् ?
सोमबार, कार्तिक ४, २०७६ १५:०७
कात्तिक ४ । बलिउडका सफल अभिनेत्रीहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा संवेदनशील हुनैपर्छ। निजी सुरक्षा गार्ड, वरिपरि घुम्ने सुरक्षाकर्मीदेखि सुरक्षित सवारीसाधनसम्म आवश्यक हुन्छ। उनीहरूको धनाढ्य जीवनको झल्को महँगा घर र सवारीसाधनले पनि दिन्छन्। बलिउडका यस्तै धनाढ्य केही अभिनेत्री छन् जो अलि लामो दुरी…